Agrochemicals, Dispersant n'ụlọnga, Crotonic Acid - Freemen
Afọ iri na itoolu na-elekwasị anya na agba agba na mkpuchi osisi.
Shanghai Freemen Chemicals Co, .Ltd chọrọ ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-eweta kemịkalụ zuru ụwa ọnụ site na imepụta mgbakwunye. Anyị na-agba mbọ iji nye ogologo oge adigide na asọmpi ezi chemical ngwaahịa ndị zuru ụwa ọnụ na mpaghara ọgwụgwụ-ahịa ahịa site na tụnyere ego.
Servicelọ Ọrụ Ọrụ Anyị
Anyị na-enye pọtụfoliyo dị iche iche iji jeere ndị na-ekesa mpaghara ihe karịrị 25 afọ nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ agrochemical. Anyị na-enye àmà site na elu intermediates na-arụsi ọrụ ike ingridients (ụmụ ahụhụ, Fungicides na Herbicides) na formulations. Anyị na-eche banyere quliaty nke ngwaahịa anyị, na-ejedebeghị na auxilaries na ihe mgbaze, anyị nwere ike inye ọtụtụ mbukota iji zute ihe ndị ahịa chọrọ.
Anyị na-enye ndị etiti ahọpụtara ahọpụtara ahọpụtara na API yana etu esi arụ ọrụ aka anyị na usoro nrụpụta GMP. Anyị na-agbaso ihe ndị achọrọ na ihe mgbaze na njikwa adịghị ọcha, iji hụ na nchekwa nke ngwaahịa anyị.
A na-eji ngwaahịa anyị ahọpụtara dị elu maka ọtụtụ ngwa: site na ụlọ ọrụ ụgbọala na nke taya na ụlọ ọrụ eletriki, ihe owuwu na mmanụ na gas.We ga-ejere ndị ahịa anyị ngwaahịa anyị na nka na ụzụ na ngwugwu data.
Anyị dị njikere ịzụlite na ịkpakọpụta rụpụta ụfọdụ ọpụrụiche dị iche iche site na kilo lab-n'ọtụtụ na mmepụta ahịa na-aga n'ihu na ogologo oge. Anyị exsiting ngwaahịa nwere pụrụ iche sịntetik uru site unitlizing kachasị usoro ma ọ bụ pụrụ iche ngwaọrụ. Anyị na-aga n'ihu na-emeziwanye ọnụ ahịa na ụkpụrụ HSE kwa ụbọchị.
CAS 3003-25-2, 2-Methyl resorcinol, CAS 608-25-3, (R) -3-Aminobutanol, Amụma, C10-C14-tert-alkyl, CAS 453-18-9,